လူသားမြား ဖူးမွျောကွညျညိုခှငျ့မရတဲ့ စတေီထူး ၃ ဆူ ကို သငျသိပွီးပွီလား… – Youth Bar
လူသားမြား ဖူးမွျောကွညျညိုခှငျ့မရတဲ့ စတေီထူး ၃ ဆူ ကို သငျသိပွီးပွီလား…
လူသားမြား ဖူးမွျောကွညျညိုခှငျ့မရတဲ့ စတေီထူး ၃ ဆူ ကို သငျသိပွီးပွီလား…?
လူသားမြား မဖူးရတဲ့ စတေီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယျ…
(၃) မဟသေရစတေီတျော တို့ဖွဈကွတယျ။
တာဝတိံသာနတျပွညျမှာ သိကွားမငျးတညျထားတဲ့ စတေီဖွဈတယျ။ သိဒ်ဓတ်ထမငျးသားဟာ ကဏ်ဍကမွငျးကိုစီးပွီး မောငျဆနျနှငျ့ အတူတောထှကျကွရာမှာ
မောငျဆနျကို ပွနျလှတျ၍ အလောငျးတျောသညျ ဆံတျောကိုဖွတျပွီးသျော ” ငါသညျ အကယျစငျစဈ ဘုရားဖွဈမညျဆိုပါက ဤ ဆံတျောသညျ ကောငျးကငျ၌ တညျစသေတညျး၊
အကယျ၍ ဘုရားမဖွဈပါက မွေ၌ကစြသေတညျး “ဟု အဓိဋ်ဌာနျပွု၍ ကောငျးကငျသို့ မွှောကျပဈလိုကျရာ မကိုဋျနှငျ့ တကှသော ဆံထုံးတျောသညျ အထကျသို့ တဈယူဇနာတိုငျတိုငျ တကျ၍ ကောငျးကငျ၌ တညျ၏။
ထိုအခါ သိကွားမငျးသညျ ဆံတျောကိုမွငျ၍ ရတနာ ပနျးတောငျးဖွငျ့ ခံယူပွီးလြှငျ မိမိနရော တာဝတိံသာ နတျပွညျ၌ စူဠာမဏိစတေီတျောကို တညျထားကိုးကှယျလေ၏။
သိဒ်ဓတ်ထမငျးသား ဘုရားအလောငျးတျောဟာ ဆံတျောကိုပယျပွီးနောကျ ယခုငါဝတျထားတဲ့အဝတျတှဟော ရဟနျးမြားနှငျ့ မလြောကျပတျဘူး။ သူတို့ကိုလညျးပယျစှနျ့မှ တျောမယျလို့ ကွံစညျတျောမူသတဲ့၊
အဲဒီအခါ ကဿဖဘုရားရှငျလကျထကျတျောက မိတျဆှဖွေဈခဲ့ဖူးတဲ့ ဃဋိကာရဗွဟ်မာကွီးဟာ ကမ်ဘာဦးက နိမိတျအဖွဈ ပျေါထှနျးလာတဲ့ ကွာရုံအတှငျးကွာတဈပှငျ့မှ ပရိက်ခရာရှဈပါးကို ထိနျးသိမျးထားရာက အလောငျးတျောထံ လာရောကျ ကပျလှူသတဲ့။
အလောငျးတျောက ထို ပရိက်ခရာကို ဆငျမွနျးပွီး ဝတျလဲတျောကို မွှောကျပဈလိုကျတယျ။ ဒီဝတျလဲတျောကို ဗွဟ်မာမငျးကဆောငျယူပွီး ၊ သုဒ်ဓါဝါသဗွဟ်မာဘုံမှာ စတေီတညျထားတယျ ။ ဒီစတေီဟာ ၁၂ – ယူဇနာမွငျ့တယျလို့ ဗုဒ်ဓဝံသအဋ်ဌကထာ ၃၃၃ -မှာ ဆိုပါတယျ။
ဟိမဝန်တာတောငျအတှငျးမှာ မန်ဒာဂီရိအမညျရှိတဲ့ တောငျမှာ မဟသေရအမညျရှိတဲ့ တနျခိုးကွီးသော နတျတဈပါးရှိတယျ။ အခါတဈပါး ဘုရားရှငျသညျ ဟိမဝန်တာအရပျ နံ့သာတောကွှပွီး နသေ့နျ့သတဲ့၊ ဒီအခါ မဟသေရနတျမငျးက လာရောကျပွီး ဘုရားရှငျနှငျ့ ယှဉျပွိုငျ ကစားလိုပါတယျလို့လြှောကျသတဲ့။ဒီအခါ ဘုရားရှငျက ဒီနတျဘီလူးဟာ တနျခိုးကွီးသူဖွဈတယျ။
သာသနာတျောကို ကွညျညိုလာလြှငျ မြားစှာ အကြိုးရှိလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့အလိုကိုလိုကျဦးမှလို့ ” အခငျြးနတျမငျးငါနှငျ့ ဘယျလိုကစားခငျြသလဲလို့ ” မေးသတဲ့။ မဟသေရနတျက ရှာသူသားငယျမြားကဲ့သို့
တူတူပုနျးတမျး ကစားခငျြပါတယျလို့ လြှောကျထားတော့ ဘုရားရှငျက ဒါဖွငျ့ သငျက ဦးစှာပုနျးပါ၊ ငါကဖျောပါ့မယျလို့ ပွောသတဲ့၊ ဒီလိုဆိုလြှငျ မကျြစိကိုပိတျထားပါ။
ကြှနျုပျ ပုနျးကှယျပါမညျ လြှောကျထားပွီး မဟသေရနတျမငျးဟာ သူကိုယျကို ကှယျကာ မွကွေီးအတှငျး ပြောကျကှယျစပွေီးမှ ဖျောပါလို့ အသံပွုလိုကျ သတဲ့။ ဘုရားရှငျလညျး သူပုနျးနတေဲ့ မွလှောကိုယူ လကျဝဲလကျဝါးပျေါတငျပွီးမှ အခွားမွလှောမြားကို ယကျခကြာ အခငျြး မဟသေရ ထလော့လို့ဆိုသတဲ့။
ဒီအခါ မဟသေရက အမှနျမှာ ရှငျကွီးဂေါတမဟာ ငါ့ကိုမမွငျဘဲ ရမျးပွောတာ ဖွဈမယျလို့ အကွံဖွဈပွီး မထဘဲ နသေေးသတဲ့၊ဒီအခါဘုရားရှငျက အခငျြး မဟသေရ ဒီလိုမကွံနှငျ့၊ ငါဟာ သငျရဲ့ ကိုယျခန်ဓာကိုမြှမက ဝမျးတှငျးက အူခှမြေားထိအောငျ မွငျတယျလို့ မိနျ့တျောမူမှ ပုနျးရာက ထပွီး အရှငျဂေါတမ အရှငျဟာ အမှနျတကယျ တနျခိုးကွီးပါတယျ၊
သို့သျောအရှငျပုနျးပါဦး၊အရှငျ့ကို ကြှနျုပျ ရှာပါဦးမယျလို့ ပွောသတဲ့၊ မွတျစှာဘုရားက ငါပုနျးရမညျဆိုသျော သငျ၏မကျြလုံးမြားကို လကျနှငျ့ ဖုံးအုပျထားပါလို့ မိနျ့တျောမူပွီး ကိုယျတျောကို ပရမာဏုမွူမြှလောကျ ဖနျဆငျးပွီး နတျမငျးရဲ့ မကျြစိနှဈဖကျကွားမှာ ပုနျးတျောမူပွီး ကောငျးကငျက အသံပေးလိုကျတယျ။
မဟသေရနတျလညျး မကျြနှာကိုဖှငျ့၊ ထကျဝနျးကငျြကွညျ့သျောလညျး ဘုရားရှငျကို မမွငျဘူးတဲ့၊ ဒါကွောငျ့ ရမွေတေောတောငျ သမုဒ်ဒရာမကနျြအောငျ ဘယျလိုရှာဖှလေို့မြှ မတှတေ့ော့မှ ဘုရားရှငျကို ပနျးပေးရသတဲ့၊ အဲဒီအခါမှ ဘုရားရှငျက မဟသေရနတျမငျးရဲ့ မကျြမှောကျအကွားက ဆငျးသကျတျောမူလာသတဲ့။
ဘုရားရှငျရဲ့ တနျခိုးတျောမြားမွငျရမှ မဟသေရနတျမငျးဟာ ဘုရားရှငျအားကွညျညိုကာ ဘုရားရှငျထံ သရဏဂုံယူကာ ဥပသကာအဖွဈခံယူပွီးနောကျ၊ မွတျစှာဘုရားရှငျဟာ လူသားဖွဈသျောလညျး လူတို့စားသော ဆှမျးကှမျးမြားနှငျ့ မတနျဘူး။
ဒါကွောငျ့ မန်ဒာဂိရီတောငျမှာ အမွဲ သီတငျးသုံးပါ။ နတျဆှမျးကှမျးမြားကို အမွဲဆကျကပျပါမယျလို့ လြှောကျထားသတဲ့ ၊ ဘုရားရှငျက ခှငျ့မပေးတဲ့ အတှကျ ဘုရားရှငျရဲ့ ရုပျပှားသဏ်ဍာနျတျောကို ကိုးကှယျခှငျ့ပေးတျောမူ ပါလို့ လြှောကျထားသတဲ့၊
ဘုရားရှငျက အခှငျ့ပေးတဲ့အခါ မန်ဒာဂီရိတောငျမှာ ရတနာခုနှဈပါးတို့နှငျ့ ဆနျးကွယျတဲ့ ကြောငျးတျောကွီးကို ဆောကျတယျ။
ထိုကြောငျးတျောကွီးအတှငျးမှာ ဂန်ဓကုဋီတိုကျကို ဖနျးဆငျးတယျ။ ဂန်ဓကုဋီတိုကျအတှငျးမှာ လက်ခဏာတျောကွီးငယျတို့ဖွငျ့ တငျ့တယျတဲ့ ဘုရားရှငျရဲ့ ရုပျတုတျောကို ပွုလုပျပွီး မြောကျမငျးတဈကောငျကို အခွံအရံနှငျ့တကှ ကြောငျးပရိဘောဂကို ပွုပွငျ ဆောငျရှကျဖို့ အပျနှံထားသတဲ့။ ဒါက မဟသေရစတေီတျောပါ။
စတေီဆိုတာ ဓာတုစတေီ၊ ဥဒ်ဒိဿစတေီ၊ ပရိဘောဂစတေီ၊ ဓမ်မစတေီ ရယျလို့ ၄ဆူရှိတယျ။ စတေီလို့ဆိုလိုကျလြှငျ ရှတေိဂုံစတေီလို စတေီကိုပဲ မွငျတတျတယျ၊ အမှနျကတော့ မဟာမွတျမုနိလို ရုပျပှားတျောဟာလညျး စတေီပါပဲ။ အခုစတေီသုံးမြိုးမှာ မဟသေရစတေီဟာ ရုပျပှားတျောစတေီဖွဈပါတယျ။
လူသားများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့်မရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူ ကို သင်သိပြီးပြီလား…?
လူသားများ မဖူးရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယ်…
(၃) မဟေသရစေတီတော် တို့ဖြစ်ကြတယ်။
တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ သိကြားမင်းတည်ထားတဲ့ စေတီဖြစ်တယ်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဟာ ကဏ္ဍကမြင်းကိုစီးပြီး မောင်ဆန်နှင့် အတူတောထွက်ကြရာမှာ
မောင်ဆန်ကို ပြန်လွှတ်၍ အလောင်းတော်သည် ဆံတော်ကိုဖြတ်ပြီးသော် ” ငါသည် အကယ်စင်စစ် ဘုရားဖြစ်မည်ဆိုပါက ဤ ဆံတော်သည် ကောင်းကင်၌ တည်စေသတည်း၊
အကယ်၍ ဘုရားမဖြစ်ပါက မြေ၌ကျစေသတည်း “ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ ကောင်းကင်သို့ မြှောက်ပစ်လိုက်ရာ မကိုဋ်နှင့် တကွသော ဆံထုံးတော်သည် အထက်သို့ တစ်ယူဇနာတိုင်တိုင် တက်၍ ကောင်းကင်၌ တည်၏။
ထိုအခါ သိကြားမင်းသည် ဆံတော်ကိုမြင်၍ ရတနာ ပန်းတောင်းဖြင့် ခံယူပြီးလျှင် မိမိနေရာ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်၌ စူဠာမဏိစေတီတော်ကို တည်ထားကိုးကွယ်လေ၏။
သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ ဆံတော်ကိုပယ်ပြီးနောက် ယခုငါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေဟာ ရဟန်းများနှင့် မလျောက်ပတ်ဘူး။ သူတို့ကိုလည်းပယ်စွန့်မှ တော်မယ်လို့ ကြံစည်တော်မူသတဲ့၊
အဲဒီအခါ ကဿဖဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဃဋိကာရဗြဟ္မာကြီးဟာ ကမ္ဘာဦးက နိမိတ်အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ ကြာရုံအတွင်းကြာတစ်ပွင့်မှ ပရိက္ခရာရှစ်ပါးကို ထိန်းသိမ်းထားရာက အလောင်းတော်ထံ လာရောက် ကပ်လှူသတဲ့။
အလောင်းတော်က ထို ပရိက္ခရာကို ဆင်မြန်းပြီး ဝတ်လဲတော်ကို မြှောက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီဝတ်လဲတော်ကို ဗြဟ္မာမင်းကဆောင်ယူပြီး ၊ သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာဘုံမှာ စေတီတည်ထားတယ် ။ ဒီစေတီဟာ ၁၂ – ယူဇနာမြင့်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓဝံသအဋ္ဌကထာ ၃၃၃ -မှာ ဆိုပါတယ်။
ဟိမဝန္တာတောင်အတွင်းမှာ မန္ဒာဂီရိအမည်ရှိတဲ့ တောင်မှာ မဟေသရအမည်ရှိတဲ့ တန်ခိုးကြီးသော နတ်တစ်ပါးရှိတယ်။ အခါတစ်ပါး ဘုရားရှင်သည် ဟိမဝန္တာအရပ် နံ့သာတောကြွပြီး နေ့သန့်သတဲ့၊ ဒီအခါ မဟေသရနတ်မင်းက လာရောက်ပြီး ဘုရားရှင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင် ကစားလိုပါတယ်လို့လျှောက်သတဲ့။ဒီအခါ ဘုရားရှင်က ဒီနတ်ဘီလူးဟာ တန်ခိုးကြီးသူဖြစ်တယ်။
သာသနာတော်ကို ကြည်ညိုလာလျှင် များစွာ အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူ့အလိုကိုလိုက်ဦးမှလို့ ” အချင်းနတ်မင်းငါနှင့် ဘယ်လိုကစားချင်သလဲလို့ ” မေးသတဲ့။ မဟေသရနတ်က ရွာသူသားငယ်များကဲ့သို့
တူတူပုန်းတမ်း ကစားချင်ပါတယ်လို့ လျှောက်ထားတော့ ဘုရားရှင်က ဒါဖြင့် သင်က ဦးစွာပုန်းပါ၊ ငါကဖော်ပါ့မယ်လို့ ပြောသတဲ့၊ ဒီလိုဆိုလျှင် မျက်စိကိုပိတ်ထားပါ။
ကျွန်ုပ် ပုန်းကွယ်ပါမည် လျှောက်ထားပြီး မဟေသရနတ်မင်းဟာ သူကိုယ်ကို ကွယ်ကာ မြေကြီးအတွင်း ပျောက်ကွယ်စေပြီးမှ ဖော်ပါလို့ အသံပြုလိုက် သတဲ့။ ဘုရားရှင်လည်း သူပုန်းနေတဲ့ မြေလွှာကိုယူ လက်ဝဲလက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးမှ အခြားမြေလွှာများကို ယက်ချကာ အချင်း မဟေသရ ထလော့လို့ဆိုသတဲ့။
ဒီအခါ မဟေသရက အမှန်မှာ ရှင်ကြီးဂေါတမဟာ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲ ရမ်းပြောတာ ဖြစ်မယ်လို့ အကြံဖြစ်ပြီး မထဘဲ နေသေးသတဲ့၊ဒီအခါဘုရားရှင်က အချင်း မဟေသရ ဒီလိုမကြံနှင့်၊ ငါဟာ သင်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုမျှမက ဝမ်းတွင်းက အူခွေများထိအောင် မြင်တယ်လို့ မိန့်တော်မူမှ ပုန်းရာက ထပြီး အရှင်ဂေါတမ အရှင်ဟာ အမှန်တကယ် တန်ခိုးကြီးပါတယ်၊
သို့သော်အရှင်ပုန်းပါဦး၊အရှင့်ကို ကျွန်ုပ် ရှာပါဦးမယ်လို့ ပြောသတဲ့၊ မြတ်စွာဘုရားက ငါပုန်းရမည်ဆိုသော် သင်၏မျက်လုံးများကို လက်နှင့် ဖုံးအုပ်ထားပါလို့ မိန့်တော်မူပြီး ကိုယ်တော်ကို ပရမာဏုမြူမျှလောက် ဖန်ဆင်းပြီး နတ်မင်းရဲ့ မျက်စိနှစ်ဖက်ကြားမှာ ပုန်းတော်မူပြီး ကောင်းကင်က အသံပေးလိုက်တယ်။
မဟေသရနတ်လည်း မျက်နှာကိုဖွင့်၊ ထက်ဝန်းကျင်ကြည့်သော်လည်း ဘုရားရှင်ကို မမြင်ဘူးတဲ့၊ ဒါကြောင့် ရေမြေတောတောင် သမုဒ္ဒရာမကျန်အောင် ဘယ်လိုရှာဖွေလို့မျှ မတွေ့တော့မှ ဘုရားရှင်ကို ပန်းပေးရသတဲ့၊ အဲဒီအခါမှ ဘုရားရှင်က မဟေသရနတ်မင်းရဲ့ မျက်မှောက်အကြားက ဆင်းသက်တော်မူလာသတဲ့။
ဘုရားရှင်ရဲ့ တန်ခိုးတော်များမြင်ရမှ မဟေသရနတ်မင်းဟာ ဘုရားရှင်အားကြည်ညိုကာ ဘုရားရှင်ထံ သရဏဂုံယူကာ ဥပသကာအဖြစ်ခံယူပြီးနောက်၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ လူသားဖြစ်သော်လည်း လူတို့စားသော ဆွမ်းကွမ်းများနှင့် မတန်ဘူး။
ဒါကြောင့် မန္ဒာဂိရီတောင်မှာ အမြဲ သီတင်းသုံးပါ။ နတ်ဆွမ်းကွမ်းများကို အမြဲဆက်ကပ်ပါမယ်လို့ လျှောက်ထားသတဲ့ ၊ ဘုရားရှင်က ခွင့်မပေးတဲ့ အတွက် ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်ပွားသဏ္ဍာန်တော်ကို ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးတော်မူ ပါလို့ လျှောက်ထားသတဲ့၊
ဘုရားရှင်က အခွင့်ပေးတဲ့အခါ မန္ဒာဂီရိတောင်မှာ ရတနာခုနှစ်ပါးတို့နှင့် ဆန်းကြယ်တဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးကို ဆောက်တယ်။
ထိုကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာ ဂန္ဓကုဋီတိုက်ကို ဖန်းဆင်းတယ်။ ဂန္ဓကုဋီတိုက်အတွင်းမှာ လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်တို့ဖြင့် တင့်တယ်တဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ရုပ်တုတော်ကို ပြုလုပ်ပြီး မျောက်မင်းတစ်ကောင်ကို အခြံအရံနှင့်တကွ ကျောင်းပရိဘောဂကို ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အပ်နှံထားသတဲ့။ ဒါက မဟေသရစေတီတော်ပါ။
စေတီဆိုတာ ဓာတုစေတီ၊ ဥဒ္ဒိဿစေတီ၊ ပရိဘောဂစေတီ၊ ဓမ္မစေတီ ရယ်လို့ ၄ဆူရှိတယ်။ စေတီလို့ဆိုလိုက်လျှင် ရွှေတိဂုံစေတီလို စေတီကိုပဲ မြင်တတ်တယ်၊ အမှန်ကတော့ မဟာမြတ်မုနိလို ရုပ်ပွားတော်ဟာလည်း စေတီပါပဲ။ အခုစေတီသုံးမျိုးမှာ မဟေသရစေတီဟာ ရုပ်ပွားတော်စေတီဖြစ်ပါတယ်။
သငျ့ ခန်ဓာကိုယျပျေါက မှဲ့တှကေနေ ပွောပွနတေဲ့ သငျ့အကွောငျး